एक रातमै ५० महिलासँग सेक्स गर्नेको लिंग नै चोरी हुन थालेपछि ! - सुनाखरी न्युज
एक रातमै ५० महिलासँग सेक्स गर्नेको लिंग नै चोरी हुन थालेपछि !
Posted on: April 18, 2020 - 6:55 pm
यो समाचारको शीर्षक पढ्दैमा अपत्यारिलो तथा अनौठो लाग्नसक्छ । एकजना पुरुषले एक रातमा ५० जना महिलासँग सेक्स गर्न सक्छ भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रै पर्छ । तर ग्रिक पौराणिक कथाका एक पात्र इराक्लिक्सले भने एक रातमा ५० जना महिलासँग सेक्स गर्न सक्थे रे । उनमा केटीहरुको तिर्खा कहिल्यैपनि मेटिँदो रहेनछ ।
तर अहिले ती ग्रिक हिरोको मर्दपना संकटमा परेको छ । फ्रान्सको तटिय सहर आहकेसोमा रहेको इराक्लिक्सको शालिकबाट लगातार लिंग चोरी हुने गरेको छ । आहकेसोको पार्क मोरेक्समा सन् १९४८ मै इराक्लिसको ३ मिनटर अग्लो मूर्ति बनेको थियो । उक्त मूर्तिको यौनांगमा भने लगातार धावा बोलिँदै आएको छ । पटक पटक यी ग्रिक हिरोको लिंग चोरी हुने गरेको छ र यो क्रम रोकिएको छैन ।
पटक पटक लिंग चोरी हुन थालेपछि लाजमर्दो भएर अन्ततः उक्त शालिकको लिंग नै हटाइएको छ । कुनै खास मौकामा मात्र यो शालिकमा लिंग लगाइने गरिएको छ । आफ्नो सत्रुलाई पनि नपरोस् भनेर कामना गर्ने गरेको लिंग चोरी हुनेजस्तो बित्यास मूर्तिमाथि पटक पटक हुने गरेको र सोही कारण मूर्तिको लिंग हटाउने निर्णय गरिएको सहरका मेयरले जनाएका छन् ।
बिरामी बच्चालाई मुखमा च्यापेर डाक्टर खोज्दै बिरालो अस्पताल पुगेपछि…
यौनः नसुनिएका तथ्य
सडकमा सिंहको रजाइँ
‘लाश’ उठेर भन्यो – ए, ‘मलाई कता लैजान लागेको’ भनेपछि मानिसहरू तर्सिए